माया गर्ने दीपीका !
काठमाडैं । म्युजिक भिडियो मोडलिङ, निर्देशन एवं टेलिचलचित्रकी अभिनेत्री तथा मोडल दीपीका भट्टले आफुलाई पुनः भिडियो निर्देशनमा रीर्टन व्याक गराएकी छिन् । अभिनय एवं निर्देशन दुबैमा रुचि राख्ने दिपिका यसो त गीतकार समेत हुन् । बिभिन्न टेलिसिरियलहरु गर्ने गरेकी दिपीका भट्टले आफूलेनै लेखेको गीतको भिडियो लिएर आएकी छिन् । म माया गर्छु... बोलको यो गीतलाई हाइलाइट्स मार्फत रीलीज गरिएको छ ।
म माया गर्छु... बोलको यो गीतलाई उनले निर्देशन गरेकी हुन् । दीपीका भट्टको आफ्नै शब्द रहेको गीतको संगीत वसन्त सापकोटाले गरेका छन् भने स्वर इन्दिरा जोशीको रहेको छ । गीतको भिडियोलाई डम्बर राईले छायांकन गरेका छन् भने मोडलका रुपमा पवित्रा भट्टराई तथा अर्पण दाहाल रहेका छन् । रोमान्टिक फ्लेवरको यो गीतमा पुजारी र मोडर्न केटी विचको प्रेम कथा दर्शाइएको छ । अब निरन्तर रुपमा भिडियो निर्देशनमा लाग्ने लक्ष्य राखेकोले यो गीतबाट निर्देशनमा रीटर्न व्याक गरेको दीपीकाको भनाई छ ।
'फर्कन छोरा 'गीत सार्वजनिक(भिडियोसहित)
काठमाडौं । बा, आमाअनि छोरो ।सानो सुखी परिवार । खेतीपाती, धन्दा, भकारो गरेर गर्जो टरिरहेको छ । छोरो हुर्किएपछि धनको लोभ । धनकमाउन छोरो परदेश । गाउँमा बुढा बा, आमामात्रै । उमेरको भने पनि बुढेसकालको भने पनि एउटा भाको छोरो परदेश गएपछि बा, आमाएक्ला। उमेरले डाँडो काट्दै गएपछि कामगर्न सक्दैनन् । खेतबारी बाँझै । परदेशिएको छोरो फर्किदैन । सहजमा त बुढाबुढी बसेकै छन् । दुःखपर्दा ? साथमा छोरोसमेत छैन । आमाअचानक बिरामी पर्छिन् र मृत्युवरण गर्छिन् । परदेशिएको छोरो आमा मर्दासमेत साथमा छैन । धनकमाउन गएको छोरो आमा गुमाउँदा पनि साथ हुनपाउँदैन भने त्यो धनको के काम ?
सानो हुन्जेल छोरोलाई माया, ममताको खाँचो हुन्छ । छोरो ठूलो भएपछि बा, आमालाई छोराको माया, ममताको खाँचो हुन्छ । तर दुःखपर्दा धन छ छोरो छैन भने त्यो धनको के अर्थ ?के पैसा पकाएर खान मिल्छ ? के पैसो खाँदा छोराको न्यानो माया प्राप्त हुन्छ ?
यो अहिलेको नेपाली समाजको विवश परिवेश हो । चाहेर, नचाहेर नेपाली समाजले अहिले यही अवस्था भोगिरहेको छ । गाउँभरिका छोराजति परदेशमा, घरमा बुढा भका बाबुआमा मात्रै । पैसा कमाउन गएको छोरोको माया, ममता उनीहरुले अनुभव नै गर्न पाउँदैनन् । कतिपयले त छोरो छ भन्न समेत पाउँदैनन् । धनभन्दापहिले काठको बाकसमा छोरो फर्किसकेको हुन्छ । यही कारुणिक परिवेशलाई समेटेर प्रवीण खतिवडाले ‘फर्कन छोरा...’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो तयार गरेका छन् ।
भिडियोमा कलाकारहरु कमलमणि नेपाल, सरिता गिरी र प्रवीण खतिवडा लगायतको सशक्त अभिनय रहेको छ । यो गीतको म्यूजिक भिडियोको सह निर्देशकमा विनोद खतिवडा रहेका छन् । दिपल बरालले निर्माण गरेको यो म्यूजिक भिडियोमा सम्रान्त थापाको प्रोडक्सन, कृष्णबहादुर थापाको सिनेमाटो ग्राफी, कृष्ण भन्डारीको सम्पादन र रंग संयोजन रहेको छ ।
गीतले परदेश गएको एक्लो छोराको प्रतीक्षामा पीडादायी जीवन बिताइरहेका बुबाआमाको कथा भन्ने रचनाकार केशव दाहालले बताए । यो गीत सुनेर र म्यूजिक भिडियो हेरेर परदेशिएका धेरै नेपाली घर फर्किने अपेक्षा गरेको अभिनेता कमलमणि नेपालले बताए । । यो गीतको भिडियोमा पैसा वाधनले मात्रै जीवन चल्दैन भन्ने संकेत गर्न कराहीमा पैसा उमालेको दृश्यपनि देखाइएको छ । दुःखपर्दा आफ्ना छोराछोरी साथमा हुनु नै धनभन्दा ठूलो सुख भएको सन्देश यो गीतले दिन खोजेको छ ।
गायक समेत रहेका केशव दाहालले यसअघि ‘बैंसैमालाको पिरती...’, ‘चौतारीमा बसौंन पियारी...’ लगायतका गीत सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
संगीताले ल्याइन तीज गीत ‘मै घुमें फनफनी’(भिडियोसहित)
काठमाडौं । गायिका संगीता शिवाकोटीले मै घुमें फनफनी’ बोलको तीज गीत बजामामा ल्याएकी छिन् ।
गायिका शिवाकोटीको प्रस्तुती रहेको गीतमा तिलक बस्नेतको शब्द, संगीत र स्वर समेत रहेको छ । सुदीप सागरको एरेन्ज रहेको गीतको म्युजिक भिडियो समेत निर्माण गरिएको छ । शिव बिकको निर्देशन रहेको गीतमा आकाश श्रेष्ठ र बर्षा शिवाकोटीले अभिनय गरेका छन् ।
गायिका शिवाकोटीले एक दर्जनवढी अन्य गीत तथा ‘कभर सङ्ग’ गाई सकेकी छिन् भने चाँडै दर्शकमाझ सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
कमल घिमिरे र मोनिका घिमिरेले ल्याए तीजको गीत ‘कोरोनाले देशै खायो’(भिडियोसहित)
काठमाडौं, ४ साउन । कमल घिमिरे र मोनिका घिमिरेको नयाँ तीज गीत सार्वजनिक भएको छ ।
कमल घिमिरेको शब्द, संगीत रहेको गीतमा अलिफ खान, संगीता पौडेल, रेशम चेपाङ र संचिता गुरुङको स्वर रहेको छ । गीतको एजेन्ज हेमन्त शिशिरले गरेका छन् । गीतको भिडियोमा रमेश थापा, कल्पना घिमिरे, युनिका क्षेत्री र कपिल मगरको अभियन रहेको छ ।
हेमन्त शिशिरको मिक्सिङ रहेको गीतको निर्देशन रुपेश श्रेष्ठले गरेका छन् । यस्तै छायांकन वीरेन्द्र परियारले गरेका छन् भने सम्पादन अनिल विष्ट ‘प्युठानी’ गरेका छन् । गीतलाई चितेली क्रियशन युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।
हाल रोजगारीका क्रममा साउदीमा रहेका लमजुङ बेसीशहर नगरपालिका ११ का कमल घिमिरले यस अघि ‘आँशु आमाको’, ‘लाहुरेकी छोरी’, ‘खोटी कर्म’ लगायतका गीत बजारमा ल्याइ सकेका छन् ।
घमेश दुलाल र प्रविष अधिकारीको ‘बनमा खयर’ लोकदोहोरी ’(भिडियोसहित)
काठमाडौं, १५ फागुन । लोक दोहोरी क्षेत्रमा एक छत्र राज गर्न सफल गायक घमेश दुलाल एक दशक भन्दा बढि सम्म गुमनाम भए । उनका गीतहरु सुन्न स्रोता तथा दर्शकले रेडियोमा कान थाप्नु पर्थ्यो कि युटुवमा खोज्न थाल्नुपर्थ्यो ।
गुमनाम जस्तै भएका गायक घमेशको जिवनले कोल्टे फेरेको छ, पछिल्लो समयमा उनी हरेक दिन जसो नयाँ सृजनामा तल्लिन छन् केहि समय अगाडी देखि चाडपर्व केन्द्रित लोक गितहरु गर्दै आएका घमेश दुलाल लोक दोहोरीका नयाँ तथा पुराना भाका संरक्षण तथा प्रर्वदनमा लागि परेका छन् । काठमाडौंको मुटु अनामनगर घट्टेकुलो चोकमा एक्सन स्टुडियो नेपाल रेकर्डिङ स्टुडियो संचालमा ल्याएका छन् , यसकै उपज हो ११ वर्ष पछिको उनको पुनरागमन सहितको नयां लोक दोहोरी गीत ‘वनमा खयर’ ।
‘वनमा खयर’ मा घमेशलाई युवा पुस्ताकी प्रतिभाशाली गायिका प्रविशा अधिकारीले साथ दिएकी छन् । चर्चीत रचनाकार शिव हमालले यो गीतको शब्द रचना गरेका छन् । गीतमा संगीतकार तथा गायक प्रभावन जे को संगीत रहेको छ । घमेश र प्रभावन जे २ दशक अघि देखि रेडियो नेपालमा गीत गाउंदा समय देखिका दौंतरी समेत हुन् । गीतको संगीत संयोजन चर्चित एरेन्जर कमल सौरागले एरेन्जर गरेका हुन् ।
केही समय अगाडि ‘भुल’ लोक दोहोरी गीत मार्फत घमेश दुलाल आउने चर्चा भएको थियो , भुलमा लोकप्रिय गायिका अन्जु पन्तले घमेशलाई साथ दिएकि छन् । उक्त गीतको सुटिङ गर्न उपयुक्त समयको पर्खाईमा रहेकाले वनमा खयर त्यो भन्दा अगाडि आएको एक्सन स्टुडियोका सञ्चालक तथा गायक , सर्जक श्याम धितालले बताए । यसपछि पनि उनका लगातार गीत आउने तयारीमा रहेका छन् ।
जन्मदिनमा देशभक्ति गीत’(भिडियोसहित)
आफ्नो ५२ औं जन्मदिनको अवसर पारेर श्रेष्ठले राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत नयाँ गीत बजारमा ल्याएका हुन् । ‘सयौं भाषा, सयौं भेष, सयौं जात–जाति, सबको पहिचान सबले सम्मान गर्नुपर्छ साथी’ बोलको गीतमा पहिचानको सवाल उठाइएको छ ।
राजेश पायल राईको लिड भोकल रहेको यस गीतको संगीत रमेश खड्काले गरेका छन् । शब्द त सुन्दर छँदैछ, त्यतिकै सशक्त स्वर र संगीत पनि छ । समग्रमा गीत सुन्दर र उत्कृष्ट छ । गीत हाइलाइट्स नेपालको युटुब च्यानलमा गीत उपलब्ध छ ।
काठमाडौं, १२ पुस । तमु ल्होसारका अवसरमा ‘यान खो ङोल्स्यो’ बोलको शुभकामना गीत सार्वजनिक भएको छ । पुस १५ अर्थात् ल्होसारको खुशियाली आदानप्रदान गर्ने उक्त गीतमा गायक तथा सङ्गीतकार पवन राना, तारा श्रीस र शिशिर गुरुङको स्वर रहेको छ ।
गीतको भिडियो गायक पवन राना युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ । गुरुङ चलचित्रका चर्चित नायक आनन्द गुरुङ र आधा दर्जन बढी भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी मोडल कुसुम गुरुङको सशक्त अभिनय रहेको भिडियोमा गुरुङ संस्कृतिका विभिन्न संस्कार देखाइएको छ । पर्यटकीयस्थल गोर्खाको सिरानचोकमा छायाङ्कन गरिएको उक्त गितको निर्देशन दीप कोके गुरुङको छभने छायाङ्कन मधुर बस्नेतको रहेको छ । हाल जापानमा रहेका मनराज गुरुङको शब्द सङ्गीत रहेको गीतको सङ्गीत संयोजन विलन थापाले गरेका छन् । स्थायी डिजिटलमा रेकर्ड गरिएको उक्त गीतको मिक्सिङ मास्टरिङ कुमार थापाले गरेका छन् ।
पाइरेसी भएपछि ‘छक्का पञ्जा ३’ यूट्युबमा(भिडियोसहित)
काठमाडौं, ९ पुस । दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाको समुहद्वारा निर्मित फिल्म ‘छक्का पञ्जा ३’ यूट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । दुई वर्ष अगाडि सिनेमा हलमा प्रदर्शन भएको फिल्म दशैंअघि ओटीटी प्लेटफर्म ‘चलचित्र एप’ मा राखिएको थियो । फिल्म पाइरेसी भएपछि डिजिटल राइट्स लिएको हाइलाइट्स नेपालले बुधबार साँझ यूट्युबमा सार्वजनिक गरेको हो ।
फिल्मलाई दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गरेकी हुन् । फिल्ममा दीपकराज गिरी, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, दीपिका प्रसाईं, बुद्धि तामाङ, विल्सन विक्रम राई, नीर शाहलगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । फिल्मलाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेका हुन् । फिल्ममा समावेश दुई गीत ‘पहिलो नम्बरमा र पछि उमेर ढल्किन्छ’ अहिले पनि चर्चामा छन् ।
कमल घिमिरेले ल्याए ‘माछी तालमा’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २३ मंसिर । कमल घिमिरेले नयाँ लोक दोहोरी गीत ‘माछी तालमा’ बजारमा ल्याएका छन् । घिमिरेकै शब्द रहेको गीतमा गायक जीवन परियार र गायिका रितु तामाङको स्वर रहेको छ । गोर्खाली मिडियाबाट बजारमा आएको गीतमा कपिल मगरको लय र रुपेश श्रेष्ठले निर्देशन रहेको छ । गीतको सम्पादन अनिल विष्ट‘प्युठानी’ले गरेको हुन् भने छायांकन वीरेन्द्र परियारले गरेका छन् । भिडियोमा कपिल मगर र मिरा गुरुङको अभिनय छ । लमजुङ बेसीशहर नगरपालिका ११ घर भई हाल रोजगारका लागि साउदी अरबमा रहेका घिमिरेले यसअघि ‘आँशु आमाको’, ‘लाहुरेकी छोरी’ लगायतका गीत बजारमा ल्याइसकेका छन् ।
नायिक श्वेता खड्का भन्छिन्, ‘म जीवनको नविन यात्रामा’
जीवनका बिभिन्न आरोह-अवरोह , उकाली-ओराली , सुख-दु:ख अनि हाँसो-रोदनका पलहरुलाई आत्मसाथ गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा आईपुगेकी छु । जिन्दगीको यो मोडसम्म आईपुग्दा मैले जे जस्ता पिर,ब्यथा, दु:ख अनि कष्टहरुसंग सामना गरेकी छु, त्यस भित्रको कहालीलाग्दो अनुभवहरुलाई शब्दमा बयान गर्न पनि असमर्थ छु । 'अचानोको पिँडा खुकुरीलाई थाहा हुन्न' भनेझैं समयको दुस्चक्रले ममाथी प्रहार गरेको अनेकन प्रहार र त्यसबाट मैले भोगेको पिंडाहरु केवल मलाई मात्र थाहा छ ।
म देख्थें, मेरो अगाडि लम्पसार परेर सुतिरहेको जिन्दगीको लामो बाटो जस्मा तिखा काँडा, ठुलाठुला पत्थर अनी आगोको ज्वालाहरु छरपस्ट भएर छरिएका छन् । मैले मेरो जीवनको बाटोमाथी छरपस्ट ति काँडाहरुलाई पन्छाउनु पर्नेछ , पत्थरहरुलाई फुटाउनु पर्नेछ अनी आगोको ज्वालाहरुलाई नाघ्नु पर्नेछ । "के म यसो गर्न सकुँला र ?" आँफैसंग प्रश्न गर्थें । आफ्नै प्रश्नमा आँफैले उत्तर दिन्थें " कि हुती हारेर मर्नु पर्छ कि त हिम्मतका साथ अघी बढ्नुपर्छ ।" अत: मैले मृत्‍युलाई रोजिनँ, जीवनलाइनै रोजें । अनी जिन्दगीका हरेक समस्याहरुसंग जुध्दै क्रमश: अगाडि बढ्दै गएँ ।
'एक्लै जीवन काट्न सकिन्छ' भन्ने कठोर निर्णय लिएर विगत ६ बर्षदेखी एक्लै हिँडीरहेकी थिएँ म । मेरो यो एकल यात्राका बखतमा धेरै पटक लडेकी छु । "अब उठ्नै सक्दिन कि " भन्ने कम्जोर भावले थिचेको त्यो बेलामा आफ्नो हात समातेर उठाइदिने कुनै साहराको आशा हुँदो रहेछ । महिनै पिच्छे करिव हप्ता दिनको लागि बिरामीको अवस्थामा पुग्ने मेरो शरीरले एक गिलास पानीसंगै औषधीको ट्याब्लेट मुखमा हालिदिने एउटा सहयोगको चाह हुँदो रहेछ । मनभित्र गाँठो परेर बसेका अब्यक्त बहहरुलाई बोकेर हिंड्नु भनेको हजार टनको पत्थरलाई टाउकोमाथी बोकेर हिंड्नु भन्दा पनि कठिन रहेछ। तर मैले मेरा बहहरु ब्यक्त गर्ने कोसंग ? मैले साथीसंगतीहरुको भिडमा आँखा डुलाएर हेरें तर मेरो पिंडालाई महसुष गर्न सक्ने कोही देखिनँ । आफन्तहरुको घेरामा खोजेँ तर माइतीमा शरण लिएर बसेको म एकल नारीले आफ्नो पिंडा पोखेर माइतीलाई थप तनाव दिनु हुन्न भन्ने मनन गरें । अत: मेरो हरेक दु:खमा म एक्लै रोएँ, पिंडाहरुमा आँफै सम्हालिएँ अनी अनेकन समस्याहरुसंग एक्लै जुधिरहें ।
"मेरो एकल जीवनलाई नियालिरहेका मेरा धेरै हितैषीहरुले एउटा जीवन साथी खोज्नको लागि नसुझाएका पनि होइनन् तर एक पटक पुछिएको सिउँदोमाथी पुन: सिन्दुर भर्न आँट गर्ने कुनै निस्वार्थी हातहरु पाईन्छ र ? फुटेको चुरासंगै चक्नाचुर भएको मेरो विगतलाई जोडेर एउटा सुन्दर आकार दिने स्वच्छ मनको धनी कोही भेटिन्छ र ? अनी विगतमा मैले गुमाएको मेरो चोखो मायालाई पुन: फर्काएर मेरो जीवनमा खुशीको रङ्ग भरिदिने कुनै दयालु मन पाईएला र ? लौ,भनेको जस्तो निस्वार्थी, स्वच्छ र निष्कपटी ब्यक्ती पनि पाइयो रे , अनी के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो दोश्रो जीवनलाई स्विकार गर्ला र ?" म मेरा हितैषीहरुलाई प्रश्न गर्थें ।
आज, मैले मेरो एकल जीवनमा एउटा सहयात्री पाएकी छु । विगतको पिँडालाई भुलाउने एउटा बहाना पाएकी छु । मेरो अतितलाई शहर्ष स्विकार गरी मसंगै सुख र दु:ख बाँड्न तयार एउटा साथी पाएकी छु । म, जीवनको दु:खद अध्यायलाई बन्द गरेर खुशीको अध्याय सुरु गर्ने निर्णयमा पुगेको छु । त्यसो भन्दैमा मैले मेरो अतिलाई चटक्कै भुल्छु भनेको भने पक्कै होइन । अतितका मिठा पलहरुलाई मनको कुनामा पोको पारी भविष्यलाई सजाउने नविन यात्राको थालनी गर्ने यो निर्णय लिनु म एक्लैको लागि सहज र सम्भव छँदै थिएन । तर मेरा परिवारका सदस्यहरुको निरन्तर प्रयास अनी साथीसंगतीहरु, अग्रज र दिग्गज ब्यक्तित्वहरु लगायत मेरा शुभचिन्तकहरुले प्रदान गर्नु भएको हौशला, शाहस र प्रोत्साहनले आज म यो निर्णय लिनमा सफल भएकी छु । यती हुँदाहुँदै पनि मनमा एउटा प्रश्न भने अवस्य छ "के यो पुरुष प्रधान समाजले मेरो यो निर्णयलाई स्विकार गर्ला र ?"
मलाई थाहाछ 'श्वेताको आँखामा आँशु मात्रै देखिनु पर्छ' भन्ने सोच बोकेका दुईचारजना ब्यक्तिहरुलाई मेरो यो निर्णयले पोल्नेछ । श्रीमती स्वर्गिय भएको १ महिना नबित्दै नयाँ दुलही भित्र्याउन हतारिने तर घरकी बिधुवी बहिनीले पुरै जीवन एक्लै काट्नु पर्छ भन्ने सोचले ग्रस्त केही ब्यक्तिलाई मेरो यो निर्णयले चसक्क घोच्नेछ । तर म प्रती साहनुभुती राख्ने, मलाई सदैव खुशी देख्न चाहने अनी संधै मेरो सफलताको कामना गर्ने लाखौं शुभचिन्तकहरुको आशिर्वाद, सदभाव र सुवेक्षाले म प्रती रिस र इर्ष्याको सोच राख्ने दुईचार जनाले स्वत: हार खानेछन् ।
(नायिका खड्काको फेसबुक पेजबाट)